आज यी ५ कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्री भयो सेयर ? - Arthatantra.com
आज यी ५ कम्पनीमा झुम्मिए लगानीकर्ता, कुनको कति कित्ता बिक्री भयो सेयर ?
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सेयर बजार दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । मंगलबार बजार ४४.१८ अंकले घटेको हो ।
उक्त दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । आज ७ अर्ब ४९ करोड ५८ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५० लाख ८२ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का अनुसार आज सबैभन्दा बढी कारोबार यूनाईटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनीको भएको छ । उक्त दिन कम्पनीको ६१ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १० लाख ३९ हजार ६०१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०७ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कारोबारकै आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको ३८ करोड ४२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता रहेको छ ।
यस्तै, आज सर्वाधिक कारोबार हुने तेस्रो कम्पनी अपि पावरको १९ करोड १२ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । आज कम्पनीको ३ लाख ९५ हजार २८१ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको हो । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४७८ रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरि आज ज्याति विकास बैंकको १७ करोड ५७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख १२ हजार ८११ कित्ता र रिदी हाइड्रोपावर कम्पनीको १६ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ६७ हजार ४२९ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
वि.सं.२०७८ भदौ २२ मंगलवार १५:३९ मा प्रकाशित
Previousआज के भयो यूनियन लाइफको सेयर ?
Nextयसै साता तेह्रथुम पावरको आइपीओ बाँडफाँट हुने